एक अनौठो यौन अनुभूति
गाउँबाट सहर पस्नुमा केहि उदेश्यहरु हुन्थे । पढाई सक्नु अनि जागिर खानु । विभिन्न समस्या भनौ खासगरी पैसाको । शिलशिला सबैको यस्तै यस्तै बनेको देख्छु र खासमा भनौ मेरो पनि ।
सुरु सुरुमा त यो सहरमा कुहिरो को काग जस्तो भैयो र यो सामान्य पनि थियो । नयाँ ठाउँ योजना नयाँ मान्छेहरु पनि एकाद मात्र चिनेका बिल्कुल निस्पट्ट लाग्थ्यो । समय बित्दै जादा कलेज तिर धेरै साथी चिन्दै गइयो ।
सहर मै घर भएका केहि बाहेक अरु पनि पढ्दै जब गर्ने हरु नै थिए । मेरो लक्ष्य पनि एई थियो र आवस्यकता पनि अझ भनौ बाध्यता ।
अस्ति भर्खरै बाट काम सुरु गरेँ एउटा अफिसमा । सुरुमा काम नजान्दा अलिक गारो थियो । दिन बित्दै जादा संगै काम गर्ने एकजना भलाद्मी मान्छे चिने र काम पनि उसैले सिकायो । अब त दिनहरु पनि सहज हुन थालेका थिए जो ऊ मा संगै थियो ।
दिनहु संगै भए पछी नजिक हुनु कुरा हुनु र संगै कोठा फर्किनु सामान्य नै थियो । भनौ उसको छाँयाले मलाई कत्ता कता अनौठो अनुभूति गराउथ्यो । पोटिलो सरिर भखरै जुंगाक रेखी बस्दै गरेको हटाकट्टा जवान जो ऊ थियो । भनौ म मा उ प्रतिको सामिप्यता बढ्दो थियो र मा चाहन्थे पनि यस्तै यस्तै...।
अफिस २ बजे नै बिदा भयो । घुम्न जाम स्वयम्भू तिर मैले भने । अलिक अक्मकयेर उसले भन्यो 'पानि पर्ला जस्तो छ !' जाने र ? जाम के पर्दैन होला मैले भने । उ बालाजु बस्थ्यो मा सैनिक अस्पतालको छेउमा फर्किने बाटो पनि त तेतै हो ।
स्वयम्भूको तल्लो गेटमा गाडीबाट झरियो सायद आकासले पनि इर्स्या गर्यो मा माथि अनि बर्साईदियो झरी । म पनि कम थिइन तर उसले के सोच्थ्यो त्यो बुझेकी थिइन मैले । म भने उ संग संसार भुल्न खोज्दै थिए । कताकता काउकुती लागेको अनुभूति भैरहन्थ्यो जब उ संगै हुन्थ्यो । खै के चाहन्थे म उ बाट ...।
झरीका मारे हामी उकालो लाग्यौ सुस्तरी सुस्तरी मैले उसको पाखुरो मुनि हात छिराए र समाते उसले मतिर नजर लायो तर भन्न केहि सकेन । उसले ज्याकेटको जिप लगायो । म भने ज्याकेट हातमा बोकेर हाफ टि-सर्टमा मस्त भिजि रहेकी थिँए ।
डाँडामाथि पुग्दा निथ्रुक्कै भिजियो । बतासले जाडो अनुभूति गरायो उ के के भन्दै थियो म भने सोचाइले नै बेहोस भएछु क्यारे झस्किएर अँ.. सम्म मात्र भन्दै थिंए ।
केहीबेर घुमेपछि उसले फर्किने कुरा गर्यो मा भने उसलाई आफु संगै राख्न चाहन्थे र अंगालो भरिको मायामा डुब्न चाहन्थे उ संगै ..। झमक्कै साँझ परिसकेको थियो । मलाई कोठा पुर्याईदिनु अनि जानु मैले भने । त्यै त हो जान सकिहल्छेउ नि उ तर्किन खोज्दै थियो ।
बहाना गरेपछि उसले ओके गर्यो । कोठा पुगेपछि जाडो भो कफी बनाऊछु मैले भने । छिटो गर भन्दै उ खाटमा ढल्कियो । म अझ ढिलो गर्दैथिए उसलाई जान नदिने सोच जो थियो मेरो । कफी ल्याएर टेबलमा राखें । छेउमा गएर सोधे जाडो भएन ? छैन..! उसले भन्यो । बत्ति थिएन केंडल बालें अनि भने 'लुगा फेर्छु जाडो भो..' सुनाउनु पर्छ र ? उ बोल्यो अनि कफी पिउदै मोबाइल चलाउन थाल्यो । म फटाफट उस्कै अगाडी नांगिए बिना कुनै संकोच । अनि टावेलले लपेटिए बिना बस्त्र । उ अझै फर्किने सोचमा थियो । अनि छेउमा बसेर फकाउन थालें 'प्लिज मेरो लागि...' उ बल्ल तल्ल बस्ने भो । खाना बनाएँ संगै खाइयो ।
म काँ सुत्ने ? उस्ले सोध्यो । खाटतिर देखाएर मैले भने ऊ त्याँ..। अनि तिमि ? म पनि । म बाहिर पेटीमा सुत्छु ! उस्ले रिसाएको स्वरमा भन्यो म झस्किएँ..। अनि भने सरि...!! म भुइमा सुत्छु ।
ऊ सुत्यो .... म मा उम्लिएको उन्मादको पारो चर्किने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । उ स्वाँ ... स्वाँ निदायो । रिस रिस पनि उठ्यो थुक्क हिजडा होस् कि क्याहो चिच्याएर भन्नु जस्तो भयो.. नामर्द ... खुला पोस हुँदा नि गोल नहान्ने... कस्तो पाराको रैछ ... मनमनै भुत्भुताए । ११ बाजी सकेको रहेछ । अघि बेरेको टावेल पनि फालेर ऊ संगै टासिएर सुते ! रिसाए रिसओस नामर्द ... फेरी सरापें । आँट गरेर बिस्तारि छोएँ अनि आफ्नै अनुभूतिमा हराएँ ।
सरिर तातेर कोइला झैं भयो.. मस्तिस्क बाट अनौठो ज्वालामुखी सरेर ओरालो लाग्दैथियो जिउ तन्कियो आफैं खुट्टाहरु फर्किए झैँ भयो ... अघि मस्तिस्कबाट ओरालो लागेको ज्वालामुखीले निकास पाएको अनुभूति भयो ... थकित भएँ म आफैमा.. ऊ भने मस्त निदाईरहेको थियो ..।
भिसुक्कै निदाएछु .... बिहान उठ्दा ऊ गइसकेको थियो । मैले थाहै पाईन......। सायद म गलत थिएँ । अनि सम्झे सबै मान्छे एकै हुदैनन् सकारात्मक सोच भएका मान्छे हरु पनि छन चिन्न नसक्नु कमजोरी हो ..।
भुलबस मैले गरेको यौनको अनौठो अनुभूति मात्र थियो यो ! मैले आफैलाई सकारात्मक बनाएँ ..!